के होला श्रृङखलाको रिजल्ट ? प्रतीक्षामा नेपाल, मिस वर्ल्ड आज ४:४५ बजेदेखी यो टिभीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २२, २०७५ समय: ११:१९:०९
ईटहरी/ चिनको सान्यामा जारी ६८ औ मिस वर्ल्डको आज फाईनल हुदैछ । जसमा प्रमुख दाबेदारिको रुपमा खडा भएकि छिन मिस नेपाल २०१८ श्रृङखला खतिवडा । उनलाई नेपालको मात्र हैन अन्य देशकाहरुले पनि सपोर्ट गरिरहेको यथार्थ सबैमाझ छर्लङ्ग छ । उनको चर्चा मिस नेपालमा हुँदै थियो जस्लाई मिस वर्ल्डमा पुगेर पनि निरन्तरता दिइन ।
उनको सौन्दर्यता त छदै छ संगै सामाजिक कार्य, प्रस्तुति शैली, निडर, देशप्रतिको माया र आत्मविश्वासको कारण उनलाई बिगतको मिस नेपाललाई भन्दा बढी प्रखर मानिएको छ । नेपालीहरुको भोट र सपोर्ट सहित उनी हेड टु हेड च्यालेन्जमा समूह बिजेता बन्दै हेड टु हेडको उत्कृष्ट ३० मा पर्न सफल भईन् । तर अर्को चरणको राउन्डमा भने उनले पराजय बेहोर्नु पर्यो ।
तरपनी मल्टिमिडिया र ब्युटी विथ पर्पस अवार्ड उनको लागि फाईनलमा पुग्ने एक मात्र बाटो थियो । अन्तत उनले यो २ अवार्ड नै एकसाथ जितेर नया ईतिहास रचिन । ईतिहास यसकारण रचियो कि, मल्टिमिडिया र ब्युटी विथ पर्पस अवार्ड फास्ट ट्र्याकको अवार्ड हो । फास्ट ट्र्याक भन्नाले मिस वर्ल्डको फाईनल राउन्डमा पुग्ने छोटो र छिटो बाटो हो । यसरी २ अवार्ड एकसाथ जित्ने प्रतियोगी मिस वर्ल्डको ईतिहासमा शृङ्खला नै पहिलो भएको समाचार छ ।
आज हुने फाईनलमा नेपाली हरु उनले मिस वर्ल्ड २०१८ को ताज लगाउदै ६८ औ मिस वर्ल्ड भएको हेर्न व्यग्र प्रतिक्षारत छन् । तर उक्त कार्यक्रम कहाँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा अझै पनि केहि नेपालिहरु अन्यौलमा छन् । तर हिजो माल्भिका सुब्बाले फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै यो अन्यौलतालाई पन्साएकी छिन् । नेपाली समय अनुसार ४:४५ बजेदेखि जुम टिभीमा मिस वर्ल्डको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सकिने छ ।
यतिबेला उनको भोटिङ लाईन पनि खुल्ला रहेको छ । मिस वर्ल्डको आधिकारिक वेबसाईटमा गएर शृङ्खलालाई भोट गर्न सकिनेछ भने मोबस्टार डाउनलोड गरेर पुरानै तरिकाले उनलाई भोट गर्न सकिन्छ । र उनलाई भोट गर्न मोडल पावर लाईभ मार्फत पनि भोट गर्न सकिने कुरा मिस वर्ल्डको पेजमा उल्लेख छ । भोटिङ लाईन आज मिस वर्ल्ड फाईनलको लाईभ टेलिकास्टको बेला सम्म खुल्ला हुने छ । यता श्रृङखलाको हौसलालाई अझै बढाउनको लागि उनको आमाबुबा सहित एक टोलि चीन पुगिसकेको छ । सम्पुर्ण नेपालिको आशलाई शृङ्खलाले निरासामा परिणत गर्ने छैनन् भन्ने कामना गर्दछौ । भोट कसरी गर्ने त ? अझै बिस्तृतमा हेर्नुस् ।
नेपाली समय अनुसार साझ ४:४५ देखि ७:४५ बजे सम्म मिस वर्ल्डको फाईनल कार्यक्रम संचालन हुनेछ । सो समय सम्म भोटिङ लाईन खुल्ला रहने छ । यसैले पनि भोट गर्नको लागि समय आज दिनभर रहेको छ । देश विदेशमा छरिएर रहेका नेपाली तथा शृङ्खलाको सुभचिन्तकहरुले चाडो भोट गर्न आग्रह गर्दछौ । श्रृङखलालाई सुभकामना ।